बन्यो भद्रपुर-भारत जोड्ने मेची पुल - विवेचना
March 28, 2018 16,769 Views
भद्रपुर, चैत १४ । साढे छ दशकदेखि निरन्तरको प्रयासबाट नेपाल-भारत जोड्ने बहुप्रतिक्षित मेची खोलामा पुल बनेको छ । कैयौँपटकको शिलान्यास र विभिन्न कालखण्डको राजनीतिक खिचातानी खेपेको मेची पुलले बल्ल सार्थकता पाएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माण परियोजनाले पुल निर्माण गरेको हो । ५६० मिटर लम्बाई तथा ९.८ मिटर चौडाइको पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय इटहरीबाट खटिएका इन्जिनियर उपेन्द्र दासले पुल निर्माण सम्पन्न भएको बताए । उनका अनुसार अब पुलमा ७० मिटर रेलिङ, सरसफाई र रंगरोगन गर्न मात्र बाँकी छ । पुल निर्माणसँगै नेपाल-भारत जोड्ने पुरानो नाका भद्रपुर-गलगलिया पुन: ब्यँुतिनेमा स्थानीयबासी आशावादी छन् ।
हुलाकी राजमार्ग परियोजनाको ३३ करोड लागतमा पुल निर्माण सम्पन्न भएको इन्जिनियर दासले बताए । परियोजनाले ०६६ पुस १७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । पुल निर्माणको ठेक्का काठमाडौँको अनक-सूर्य जेभीले पाएको हो । ठेक्का सम्झौता भएको एक महिनापछि माघ २१ गते तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजय गच्छदारले पुलको पुन: शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यास गर्दै गच्छदारले निर्धारित मिति तीन वर्षमा पुल निर्माण हुने दाबी गरेपनि ९ वर्ष बितेको छ ।
‘५० वर्षअघि नै बन्नुपर्ने मेची पुल ढिलै भए पनि निर्माण भएको छ । यो मेरा लागि निकै खुसीको कुरा हो,’ मेची पुल निर्माण गर्नुपर्ने भनी जुटेकामध्येका एक अभियन्ता चिन्तामणि दाहालले खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यो पुलले पुरानो भद्रपुरलाई अब फेरि नयाँ सहरका रूपमा विकास गराउने छ ।’
तर, खोलामा पुल निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि पुलसम्म पुग्ने बाटो निर्माणको काम भने अन्योलपूर्ण अवस्थामा छ । हुलाकी परियोजनाले पुलदेखि २ सय ९० मिटर नेपालतर्फ र एक सय ५० मिटर भारततर्फ बाटो निर्माण गर्नुपर्ने छ । तर, नेपालतर्फ पुल छेउबाटै बस्ती रहेकाले उक्त बस्ती नउठाएसम्म बाटो निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले पुल निर्माण पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएको बताए । उनले खोलामाथि पुल बने पनि पुलसम्म पुग्ने बाटो बनिनसकेकाले पुल बन्यो भन्न नसकिने बताए ।
Previous धर्मका नाममा विकृति ! नम्बर प्लेटबिनाका गाडीमा प्रचार
Next सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित गतिविधि रोक्न के गर्ने ?
Pingback: standing dog
Pingback: prazdniki 24 octyabrya
Pingback: change youtube link to mp3
Pingback: den piva v rossii
Pingback: new siriustube647 abdu23na1844 abdu23na2
Pingback:2dekabrja prazdnic
Pingback: kahn cars
Pingback: online game 2019
Pingback: Used Programmers by Thermotron at used-line
Pingback: text von ode an die freude
Pingback: nessaja text
Pingback: словарь иностранных слов
Pingback: she loves me not перевод
Pingback: праздник железнодорожника
Pingback: ротонда одежда
Pingback: bellino unicatt
Pingback: dvizhenie postuplenie i rasxod nalichnyx sredstv potok nalichnyx sredstv
August 16, 2017 193,260